Fanonganam-panjakana : Ampiasain’ny firenen-dehibe Ravalomanana ? -
AccueilRaharaham-pirenenaFanonganam-panjakana : Ampiasain’ny firenen-dehibe Ravalomanana ?
25/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy nahafaly ireo firenena tandrefana ny fanambaran’ ny filoham-pirenena malagasy, Hery Rajaonarimampianina, fa anisan’ny mpiara- miombon’ antoka voalohany amin’ i Madagasikara ny firenena tatsinanana, izany hoe ireo aziatika. Taorian’io fanambarana io no nanomboka ny fanakorontanana maro samihafa nitranga teto amin’ny firenena. Ny fampitandremana maro samy hafa isan-karazany izay asehon’ ny vondrona iraisam-pirenena rahateo dia efa hita sy fantatra ankehitriny. Tsiahivina ny vaovao izay navoakan’ny gazety iray, mpiseho isan’andro, nilaza fa misy teratany frantsay iray nirahina sy hikasa hifofo ny ain’ny Filoha no fantatra fa karohina ary tsy hay hatreto hoe efa voasambotra ve sa tsia. Io teratany frantsay io izay nambaran’ io gazety io hatrany fa ‘’tireur d’élite’’ na manam-pahaizana manokana amin’ny fitifirana lavitra. Angamba izay tokoa izany ny nahatonga ny fandraisana fepetra tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina teo amin’ny toerana nijeren’ny filoham-pirenena matso, nandritra ny fetim-pirenena ny 26 jona. Hatreto anefa mbola tsy nandrenesam-peo na fanazavana mahakasika ity raharaha ity ny masoivoho frantsay, taorian’ny fivoahan’io vaovao io na marina izany na tsia. Tsy vaovao amin’ ny rehetra mantsy ny tetika izay hampiasain’ ireo vahiny rehefa misy izay paikana fanonganam-panjakana tian’izy ireo atao izay, ary tsara hatrany manaraka ny vaovao iraisam-pirenena hahafahana mahafantatra ny zava-misy. Ny tany Rwanda ny taona 1994 ny nitifirana ny fiaramanidin’ny filoham-pirenena tany an-toerana, ary ny raharaha namonoana ny filoha lybianina Mohamed khadafi ihany koa noho ny fitsiriritan’ ireo firenen-dehibe ny harena sy ny solika tao amin’ ireo firenena voatonona ireo. Tsy afa-bela rahateo fa voatonona hatrany ny Frantsay sy ny Amerikanina nandritra ny famonoana ireo filoham-pirenena vahiny roa ireo.
Ankoatra ireo fomba fanonganam-panjakana mivantana voalaza etsy ambony ireo dia matetika ampiasain’ ny firenen-dehibe ihany koa ireo mpanao politika izay eritreretin’ izy ireo fa hahatarika vahoaka. Tsy miafina rahateo izany amin’ izao fotoana izao, fa efa fantatra io olona io, izay tsy matahotra n’inona n’inona satria efa eo ambany elatry ny vondrona iraisam-pirenena. Tsiahivina hatrany, ary tsy misy tsy mahalala fa olon’ny Amerikanina Ravalomanana Marc. Tsy mihafina izany nandritra ny fotoam-pitondrany ary izy io ampiasaina hanakorontana io. Manaporofo izany rahateo ny fangatahan’ny antokon’ity iraky ny vondrona iraisam-pirenena ity dia ny fangatahany misesy ny kianjan’i Mahamasina hanatanterahana ny fankalazana ny tsingerin-taona faha-15 ny TIM, na dia efa lasa aza ny daty manamarika izany. Fanakorotanana rano iray ihany no tiana atao amn’io. Tena tsy mahafaly ny vondrona iraisam-pirenena tokoa ny fitodihan’i Madagasikara any amin’ ireo firenena kely maso, ka na dia ny olona nilaza fa mahandry ny fifidianana amin’ny taona ho avy aza ity manakorontana sy mitarika fidinana andalam-be. Ho lavitry ny fiandrianam-pirenena, noho izany, i Madagasikara raha mbola misy olona manaiky ampiasain’ny vondrona iraisam-pirenena hatrany. Efa mazava ny tanjon’ izy ireo fa ny harem-pirenana no tiany alaina sy giazana. Ka rehefa misy mpitondra iray tahaka ny ankehitriny mitazona mafy izay fiandrianam-pirenena izay ary tsy manaiky ny hambakain’ ireo firenen-dehibe , dia mampiasa olona teratany na vahiny hamotika ilay firenena amin’ ny fomba rehetra izy ireo. Raha atao aza hoe tsy mahomby io hetsika fanakorontanana anirahan’ny vondrona iraisam-pirenean an-dRavalomanana io, dia miara-dalana amin’ io paika tiana hanakorontanana io ny fambolena ady an-trano. ka ny korontana sy ny tsy fahavitan’ny fifidianana no kendrena, hahafahana maka mora foana ny harem-pirenena Malagasy.